3D मुद्रित सामाग्री आत्मा हो? सबै भन्दा उत्तेजक 3D मुद्रण सामाग्री थाहा तपाईंलाई - चीन सिक्सी Lanbo मुद्रण
3D मुद्रित सामाग्री आत्मा हो? सबै भन्दा उत्तेजक 3D मुद्रण सामाग्री थाहा तपाईंलाई
धेरै मानिसहरू 3D मुद्रण, सबै को पहिलो,3डी छापेको सुन्दर सानो वस्तुहरु द्वारा आकर्षित ध्यान। यसबाहेक, केही साथीहरू 3D प्रिन्टरहरू विभिन्न मोडेल को प्रदर्शन ख्याल, र 3D मुद्रण सामाग्री प्रायजसो वास्तै गरिएको छ। वास्तवमा, 3D मुद्रण सामाग्री 3D मुद्रण प्रविधिको विकास लागि एक महत्वपूर्ण सामाग्री आधार हुन भने गर्न सकिन्छ। 3D मुद्रण थप व्यापक प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सामाग्री को विकास हदसम्म निर्धारण गर्छ।
वर्तमानमा, 3D मुद्रण सामाग्री मुख्य रूप बहुलक सामाग्री, धातु सामाग्री, पाउडर सामाग्री, चीनी माटो सामाग्री र समग्र सामाग्री समावेश गर्नुहोस्।
बहुलक सामाग्री मुख्य रूप ईन्जिनियरिङ् प्लास्टिक, जैव-प्लास्टिक, thermosetting प्लास्टिक, photosensitive रेजिन, आदि, र सामाग्री को विभिन्न प्रकार को प्रदर्शन एकदम फरक छ समावेश गर्नुहोस्।
इन्जिनियरिङ प्लास्टिक औद्योगिक भागहरु वा बाहिरी केसिङ सामाग्री रूपमा प्रयोग औद्योगिक प्लास्टिक बुझाउँछ। यसलाई उत्कृष्ट बल, प्रभाव प्रतिरोध, गर्मी प्रतिरोध, कठोरता र वृद्ध प्रतिरोध संग एक प्लास्टिक छ। यो आवेदन को एक विस्तृत श्रृंखला संग 3D मुद्रण सामाग्री एक प्रकारको छ; bioplastics यो मुख्य रूप छ पीएलए, PETG, PHB, आदि, र राम्रो biodegradability छ; thermosetting राल उच्च बल र आगो प्रतिरोध छ, र लेजर sintering पाउडर 3D मुद्रण प्रयोग प्रक्रिया निर्मित लागि धेरै उपयुक्त छ; photosensitive राल छिटो उपचार गति, टेबल उत्कृष्ट ड्राई प्रदर्शन, सजावट पछि चिल्लो उपस्थिति छ, धेरै उच्च सटीक उत्पादनहरु मुद्रण को विकल्प हो।
हालको 3D मुद्रण सामाग्री को सबै भन्दा प्लास्टिक हो हुनत, असल यांत्रिक बल र धातु को विद्युत चालकता अनुसन्धानकर्ताहरूले धेरै धातु वस्तुहरु को मुद्रण रुचि गरेका छन्। मुख्य धातु सामाग्री स्टेनलेस स्टील र superalloys र यस्तो टाइटेनियम रूपमा गैर-फलाम धातु, म्याग्नेसियम मिश्र धातु, र गैलियम सहित फलाम धातु समावेश गर्नुहोस्।
यसलाई न एक प्लास्टिक सामाग्री न त एक धातु सामाग्री छ, तर 3D मुद्रण प्रविधि आफ्नो उत्कृष्ट adaptability संग, पाउडर सामाग्री अझै पनि 3D मुद्रण लागि एक राम्रो विकल्प हो। 3D मुद्रण उच्च पाउडर सामाग्री आवश्यक छ, र सजावट पाउडर राम्रो सामाग्री formability, उच्च सजावट बल, साना पाउडर कण आकार, ढेर मा कठिनाई, राम्रो रोलिंग सम्पत्ति, उपयुक्त घनत्व र porosity, र छिटो सुकाउने र उछाल गर्न आवश्यक छ। ASK प्रौद्योगिकी कं विकास पहिलो आत्म-उत्पादित पानी छर्कने बालुवा प्रकार 3D मुद्रक, लिमिटेड पाउडर सामाग्री मा क्वार्ट्ज बालुवा प्रयोग गर्दछ।
Aluminosilicate माटोको पाउडर 3D मा प्रयोग गर्न सकिन्छ माटोको उत्पादन मुद्रित।3डी माटोको उत्पादन मुद्रित, गर्मी (अप गर्न 600 ° C) पानी को लागि अभेद्य, recyclable हो, गैर-विषाक्त छ, तर यसको बल छैन उच्च, यो एक आदर्श cookware रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, tableware (कप, कटोरे, प्लेट, अन्डा छ कप र कोस्टरस)) र यस्तो दीप, टाइल्स, vases, र कलाकार्यहरू रूपमा घर सजावट सामाग्री।
पक्कै,3डी मुद्रण को आधारको रूपमा,3डी मुद्रण सामाग्री भविष्य 3D मुद्रण लागि एक महत्वपूर्ण बजार हुनेछ। उत्कृष्ट प्रदर्शन थप र सामाग्री 3D मुद्रण उद्योग विकास प्रवर्द्धन गर्न विकास गरिनेछ। साथै, 3D मुद्रण सामाग्री बाहेक, कोर प्रविधि र 3D मुद्रण को कोर घटक mastering पनि घरेलू 3D मुद्रण उद्योग को विकास मा एक महत्वपूर्ण सफलता हो। हावाहुरीमा श्रृंखला 3D मुद्रक सोध्नुहोस् द्वारा शुरू चीन मा विकास पहिलो मसी जेट printhead छ। (3D मुद्रण कोर घटक) एउटा कोसेढुङ्गो छ, र म चीन मा थप कम्पनीहरु 3D मुद्रण कोर प्रविधिको विकास सट्टा विदेशी प्रविधि मा सम्पूर्ण परेर धेरै ऊर्जा लगानी गर्न सक्छन् भन्ने आशा।